Ten Classic O'Jays Iingoma
Iminyaka engaphezu kwama-50 yomculo ogqwesileyo
Eyenziwe eCanton, eOhio ngo-1958, i-O'Jays ibhale inombolo ye- Billboard ye- B & B ibetha nge-platinum ezintlanu kunye ne-albhamu ezine zegolide. Ezihlanu ze-albhamu yazo ziye zafikelela kwinombolo enye kwi- bhodi yeBillboard R & B. Eli qela laqala njenge-quintet enomculi okhokelayo uEddle Levert, uWalter Williams, uWilliam Powell, uBobby Massey, kunye neBill Isles. UMassey no-Isles bashiya elo qela, kwaye njenge-trio, i-O'Jays yazuza impumelelo yabo emva kokusayinela ne-Philadelphia International Records ngo-1972. UPowell washiya elo qela ngo-1976 waza watshintshwa nguSammy Strain evela ku- Little Anthony kunye ne-Imperials . UPowell waphelelwa ngumhlaza ngo-1977. Ukushiya kwashiya i-O'Jays ngo-1992 kwaye yatshintshwa nguNathaniel Best. Xa ehamba phambili ngo-1995, watshintshwa ngu-Eric Nolan Grant.
Leli qela laphakathi kweenkwenkwezi ezininzi kwiiRekhodi zamazwe ngamazwe aseFiladelphia , kuquka uTeddy Pendergrass , uHarold Melvin kunye neBlue Notes , uLou Rawls, uPatti LaBelle , uPhyllis Hyman, uBilly Paul, iDegrees, i-Jones Girls, uBunny Sigler kunye noJean Carn. I-Jacksons ikhuphe enye i-albhamu ene-self-titered kwilebula ngo-1976.
I-O'Jays 'intlonelo iquka i-BET Lifetime Achievement Award, kunye nokufakwa kwiHolo kunye neHolo yoLwazi lweNkqantosi kunye neNkundla yeeNkcazo ze-NAACP.
Nazi "ii-Ten Classic O'Jays Songs."
1972 - "Uthando Uqeqesho"
IOJays. Gems / Redferns
Ingoma yomanyano wamazwe ngamazwe aboniswe nguKenneth Gamble noLeon Huff, "Uthando loThando" yi-O'Jays lwafikelela kwinani elilodwa kwiBillboard Hot 100 kunye neelaphu zeR & B ngowe-1972. Kwi - albhamu ye- Backstabbers , yayiyigolide eqinisekisiweyo, kwaye 2006, le ngoma yafakwa kwiGrammy Hall of Fame.
1972 - "I-Backstabbers"
IOJays. UMichael Ochs Archives / Getty Izithombe
Ingoma yesihloko ye-O'Jays '1972 i- Backstabbers i- albhamu yafikelela phezulu kwicatshulwa yeBillboard R & B kwaye yafunyanwa kwinombolo yesithathu kwi-Hot 100. Yayiyinkolelo yokuqala yeqela kwiFiladelphia International Records, elaphethwe nguKenneth Gamble noLeón Huff. Kwakuyi-golide eqinisekisiweyo yokuthengisa ngaphezulu kweeyunithi ezigidi.
Ngo-1974 - "Ukuthanda Imali"
IiOjays. UMichael Ochs Archives / Getty Izithombe
I-albhamu yase-O'Jays ka-1973, ethi "Ukuthanda Imali" yonyulwa kwi-Grammy Award ye-R & B ephezulu yokuSebenzisana ngokuSebenzayo - iDuo, Group okanye Chorus. Igolide elilodwa lingena kwinani lesithathu kwi- bhodi yeBillboard R & B, inombolo yesithoba kwi-Hot 100, kwaye ikhutshwe okanye isampuli ngamaninzi eengcali.
Ngowe-1978 - "Sebenzisa ube ngumntwana wam"
IOJays. IGAB Archive / Redferns)
Ngomnyaka we-1978, "Sebenzisa ukuba ube yintombazana yam" yaba yi-O'Jays inombolo yesibhozo enye kwi- bhodi yeBillboard R & B. Ukususela kwi - albhamu egcweleyo yothando , ingoma edayiswe ngaphezu kweeyunithi ezigidi.
Ngo-1975 - "Ndiyamthanda Umculo"
IOJays. Iifoto zamazwe ngamazwe ngamazwe / i-Courtyy Getty Images
I-albhamu ethi Reunion yase-O'Jays ka-1975, ethi "Ndiyamthanda Umculo" yayiqinisekiswe ngegolide kwaye yahlala ephezulu kwiTydibhodi yeDrabhodi yokuDanisa iiveki ezisibhozo. Kwakhona kwakukho nombolo kwiretshi ye-R & B, kwaye yafikelela kwinombolo yesihlanu kwi-Hot 100.
1976 - "Livin" yeveki "
Ngowe-1976, "Ukuphila" kweveki "yaba yinombolo yesihlanu ye-O'Jays enye kwi- bhodi yeBillboard R & B. Ukususela kwi-albhamu yokuHlanganisa iNtsapho , yachitha iiveki ezimbini phezulu kwetshathi, kwaye yafikelela kwinombolo engamashumi amabini kwi-Hot 100.
1976 - "Umyalezo Womculo Wethu"
Ingoma yomxholo we-O'Jays '1976 Umyalezo kwi- albhamu yethu yomculo yayiyinombolo yabo yesithandathu enye yeR & B.
Ngowe-1976 - "Ingane yaseDarlin 'yaseDarlin (i-Sweet, Tender, Love)"
Ukusuka kwi-O'Jays '1976 Umyalezo kwi- albhamu yethu yomculo , "Darlin' Darlin 'Baby (Sweet, Tender Love)" kwakuyinombolo ye sixhenxe enye yeqela kwiBhodi yeBillboard R & B.
1987 - "Lovin 'Wena"
"Lovin 'Wena" kwi-O'Jays' ka-1987 Makhe Ndikuthintele I- albhamu yowunombolo yeyeshumi enye kwididi yeBillboard R & B. Yayiyicatshulwa yabo yokugqibela yokuqhayisa i-hit eyayiqulunqwa yenziwa nguGamble noHuff.
Ngo-1975 - "Makhe Ndenze Uthando"
Ukususela ku-1975 i-albhamu yokusinda , "Makhe Ndibe Nothando Kuwe" yayingekho enye yeTyJays 'enkulu yetshathi yetshathi, efikelela kwinani elilishumi kwiitshati zeBillboard R & B. Nangona kunjalo, ngenye yeengoma zokutyikitya zikaEddle Levert, kwaye ihlala iqhuba abalandeli babo besifazane ukuba bajabule ngexesha lokudlala.
Iingoma ezi-10 eziphezulu ze-Party manje
Iingoma eziphezulu ze-10 zeFleetwood Mac
Iingoma eziphezulu ze-Rap Rap ka-2012
Iingoma eziKhulu kakhulu zeNkolo zesiKhristu, iNxalenye yesi-2
Kendrick Lamar - I-Untitled Not Imastered
Ukuguqula iMicroliters ukuya kwizigidigidi
IiFilimu zeeNkcazo malunga neNkundla yamaLungelo eMoqo
Ziziphi Iimpepha Ezintle Kakhulu Ngebhokisi?
Iifomati zeoli zePowotypes
Ukuqonda i-Ad Libitum kwiNtsebenzo yoMculo
'Black Swan' kunye neBuality of Women's Life